नायक कृष्ण श्रेष्ठकाे सम्झनामा यस्तो बन्यो माझी बस्ती, स्वेताकाे सपना यसरी पुरा बनेपछि… भिडियो हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > भिडियो > नायक कृष्ण श्रेष्ठकाे सम्झनामा यस्तो बन्यो माझी बस्ती, स्वेताकाे सपना यसरी पुरा बनेपछि… भिडियो हेर्नुस्
नायक कृष्ण श्रेष्ठकाे सम्झनामा यस्तो बन्यो माझी बस्ती, स्वेताकाे सपना यसरी पुरा बनेपछि… भिडियो हेर्नुस्
admin February 14, 2019 भिडियो, समाज 0
विनाशकारी भूकम्प पछि एकिकृत बस्ती बनाउने देशमा एक किसिमको लहर नै चल्यो । हेर्दा चिटिक्क देखिने ती सुन्दर घरहरु बनाउन साच्चै नै मनै लोभ्याउने खालका हुने गर्छन् । धूर्मुस- सुन्तलीले बनाएका गिरानचौर बस्ती होस् या मुसहर बस्ती अनि अहिले बन्दै गरेका स्वेता श्री फाउन्डेसनको अभिभावकत्व तथा संरक्षण पाएका सिन्धुपाल्चोकको माझी बस्ती । चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–१४ भिमटार माझी बस्तीमा नायीका श्वेता खड्काको समन्वयमा निर्माण सुरु गरिएको एकीकृत माझी बस्ती निर्माणमा ढिलाई भए पनि विभिन्न कठिनाईहरुलाई छिचौल्दै अघि बढिरहेको छ ।
भिमटारको माझी बस्तीका स्थानीयलाई लक्षित गरि नायिका खड्काले श्वेता श्री फाउण्डेशनमार्फत ५३ घर निर्माण सुरु गरेकी थिइन् । ४६५ वर्ग फिटमा निर्माण हुने घरको लागत प्रति घर लगभग ७ लाख रुपियाँ पर्न आउँछ । फाउण्डेशनले स्थानीयसँग घर निर्माणमा लाग्ने ७ लाख आफैले व्यहोर्न पर्ने र अन्य भौतिक पूर्वाधारको काम मात्रै फाउण्डेशनले गर्ने सहमतीमा काम सुरु गरेको थियो । अहिले विभिन्न किसिमका आर्थिक संकटहरु चिर्दै माझी वस्तीका अगुवाहरु पनि स्वेतासँगै हातेमालो गरिरहेका छन् । यस्तो बन्यो नायिका स्वेता खड्काको “माझी बस्ती”, स्वेता खड्का हाम्रो भगवान हुन् ….
गर्लफ्रेण्डको बिषयमा बिबाद भएपछि आफ्नै साथीको निर्मम हत्या । CCTV मा यस्तो देखियो घटनास्थल – भिडियो हेर्नुस्
मुखैले गुलाफ दिदै कृष्णले भने- I Love U रुपा! पहिलो किसको कुरा गर्दा रुपा लजाईन् (भिडियो सहित)
कालिकोट गॉउपालिका कार्यालय ध्वस्त पारे विप्लवका सेनाले – हेर्नुहोस भिडियो